Pro 27 | Mal1865 | STEP | Aza mirehareha ny amin'ny ho ampitso ianao; Fa na dia ny havoaky ny anio aza tsy fantatrao.
15 Tahaka ny fijononoky ny ranonorana be Ny vehivavy tia ady. 16 Izay misakana azy dia toy ny misakana ny rivotra, Sady toy ny mamihina ▼
▼ Na: mihatra amin'ny
diloilo ny tànany ankavanana.
17 Ny vy maharanitra ny vy, Toy izany, ny olona maharanitra ny tarehin'ny sakaizany. 18 Izay miaro aviavy dia hihinana ny voany; Ary izay miambin-tompo dia homem-boninahitra.
20 Ny fiainan-tsi-hita ▼
sy ny fandringanana tsy mety voky, Dia toy izany no tsy ahamamoan'ny mason'ny olona. 21 Ny memy ho an'ny volafotsy, Ny fandrendrehana ho an'ny volamena, Ary ny toetry ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra derainy.
23 Fantaro tsara ny tarehin'ny ondry aman'osinao, Ary miahia tsara ny andian'ny bibinao; 24 Fa ny harena tsy ho mandrakizay; Ary moa haharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satro-boninahitra? 25 Na dia lany aza ny ahitra, ka mitsiry ny solofony, Ary voataona ny zava-maniry any an-tendrombohitra, 26 Ny zanak'ondry dia hahazoanao fitafiana, Ary ny osy hamidinao tany; 27 Ary ho ampy hosotroinao ny rononon'osy Sy ho an'ny ankohonanao, Ary hisy hiveloman'ny ankizivavinao.